Pakistan: Famporisihana Ny Tanora Ho Amin’ny Ampitso Tonga Lafatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Septambra 2011 8:31 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, عربي, русский, Português, Italiano, 繁體中文, 简体中文, English
Ny Ivon-toeram-pianarana Fandriampahalemana sy Laika (Institute of Peace and Secular Studies - IPSS) dia fikambanana kely naorina ho an'ny tanora any Lahore, Pakistan, izay mikendry ny handrisihana ireo tanora Pakistane sady manofana azy ireo hiatrika ny fanambin'ny anio. Koa satria tsy afaka mahazo fanabeazana feno sy ampy ny ankabeazan'ireo tanora any Pakistan dia maniry ny hanolo-tànana izay tratra ho an'ireo tanora ny IPSS ary manome fahavononana azy ireo hiatrika ny ho aviny.
I Pakistana no anisan'ny manana isan-jatonà mponina tanora avo indrindra manerana izao tontolo izao, novinavinaina ho 63% eo. Araka ny tatitry ny Kaonsily Britanika ‘The Next Generation’ na ny ‘Ny Taranaka Manaraka’ dia tsy hitsaha-hitombo io isan-jato io hatramin'ny taona 2045, ao aorian'izay ny isan-jaton'ireo olon-dehibe dia hihoatra ny an'ireo tanora. Manana tombon-dahiny azo araraotina i Pakistan noho izany, amin'ny alalan'ireo tanorany. Ny fanontaniana mipetraka dia mety hitondra tombon-tsoa ve sa ho loza ny fahatanoran'ny mponina. Varavarankely iray ho an’ i Pakistan izany tombon-dahiny izany hiotazana tombontsoa ara-tsôsialy sy toe-karena izay miankina amin'ny taranaka tanorany.
Dinidinika nandritra ny atrikasa 'ho solon'ny herisetra'
15 taona lasa izay no nanorenan'i Dep Saeeda, mpahay lalàna sy mahery fo, liana amin'ny sôsialy ny IPSS , izay nikatsaka ny hanome sehatra ireo tanora ho aminà lahadinika malalaka. Mba hanazavana ny antony mahatonga ireo zavatra ataony hifantoka amin'ny tanora dia hoy izy:
Mila tohanana ny tanora eto amin'ny tanintsika, mila henoina. Mila mivoaka sy miteny ary mijery ny lafiny roan'ny tena zava-misy marina. Io sehatra io dia natao mba handrenesana ny hevitr'izy ireo amin'ny alalan'ny lahadinika samihafa manoloana ireo olana ara-pôlitika, toe-karena ary sôsialy. Io dia ahafahan'izy ireo ihany koa mizara ny heviny amin'ny hafa sy mandray tsikera mahasoa.
Lanonan-takariva Open Mic. Sary avy amin'ny IPSS
Takon'ny fahasahiranana ara-toekarena, sôsialy sy ny maha-olona tanaty ady nisy rà nandriaka nanoherana ny fampihorohorona, ny hany fanantenanan'i Pakistan dia miankina amin'ny tanorany. Araka ny filazan'i Diep, ny Fampianarana sy ny fiahiana ara-tsôsialy, no fanalahidy hahazoana antoka fa ny ho avin'i Pakistan dia tsy ho nofy ratsy intsony toy ny amin'izao fotoana.
Manomana hesika samy hafa matetika ny IPSS natao manokana ho an'ireo tanora. Tafiditra ao anatin'izany ireo takarivam-pikoranana ataon'ny Open Mic isan-kerinandro, fijerena ireo horonan-tsary sy famakiam-boky, ary ireo hatrik'asa ho an'ny adihevitr'ireo manam-pahaizana…..Matetika no manomana hetsika samihafa natao manokana ho an'ny tanora ny IPSS. Tafiditra ao anatin'izany ireo takarivam-pikoranana ataon'ny Open Mic isan-kerinandro (Fandraisana Fitenenena Malalaka), fijerena horonantsary sy famakiana boky, ary ireo atrikasa ho aminà adihevitr'ireo manam-pahaizana.
Ny hetsika Open Mic dia ahafahan'ireo tanora mpandray anjara mizara ny heviny amin'ny endriny samihafa, fohy ary mifanakalo. Tafiditra ao anatin'izany ireo famakafakana, ireo taratasy, lahatsoratra, tononkalo, hira, feon-kira ary izay zavatra rehetra ahafahany maneho sy mizara hevitra sy famoronana.
Tao anaty fandaharana ihany koa ny fandefasana horonantsary. Nosafidina manokana ireo horonantsary, hitondràna ireo tanora aminà fitsangantsanganana an'eritreritra mandritra ny ora 2 ao anatin'ny kolontsaina, tantara, sy filozofia.
Ny IPSS ihany koa dia mandrisika ireo tanora ho amin'ny fihetsiketsehana sy fanaraha-maso am-pilaminana ireo olana ara-pôlitika sy sôsialy samihafa. Izany dia mandrisika ireo tanora hampiasa ny zony haneho hevitra amin'ireny olana ireny.
Ny tanjon'ny IPSS dia fandrisihana ireo tanora, fanomezana azy ireo sehatra hanandratan'izy ireo ny feony sy hizaràny ny heviny amin'ireo tanora mitovy aminy, ao aminà fiarahamonina iray izay maniry hatrany ny hampagina azy ireo.